एउटा यस्तो क्यामेरा...
05 Jun 2020 | शुक्रबार, २३ जेष्ठ, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
शुक्रबार, १७ असोज, २०७६
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो क्यामेरा तयार गरेका छन् यो प्रविधिका माध्यमबाट शरिरको सानो भन्दा सानो चीज पत्ता लगाउन सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
डाक्टरहरुले शरिरको भित्री भागको जाँच गर्नका लागि मेडिकल औजार इन्डोस्कोपको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यो प्रक्रियाको मद्दतका लागि उक्त क्यामेरा तयार गरिएको बताइएको छ । अहिलेसम्म अस्पताल र डाक्टरहरुले महंगो स्क्यान र एक्स रे मा परनिर्भर हुन परिरहेकोमा अब यो प्रविधिले नयाँ रुप लिने भएको छ । यो नयाँ क्योमराले शरिरको भित्री भागमा प्रकाशका माध्यमबाट सम्पूर्ण अंगको छर्लङ चित्रण गर्ने गर्दछ ।
यूनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गका प्रोफेसर केभ धालीवालले भने, यो क्यामेरामा अलग अलग प्रकारका काम गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । अपरेशनका शिलशिलामा शरिरको भित्र कुनै डिभाइसको लोकेशन देखाउन एकदम जरुरी रहेको छ । जुन यो क्यामेराले गर्ने गर्दछ ।
सामान्य परिस्थितिमा यो क्यामेराले २० सेन्टिमिटर कोशिकाको तलसम्म प्रकाशको स्रोतलाई ट्याक गर्ने क्षमता राख्ने गर्दछ । इन्डोस्कोपबाट निस्कने प्रकाशले शरिरको एक अंगलाई फोकस गरेर जाने गर्दछ तर यो शरिरका विभिन्न अंगका कारण साधारणतया जताततै फैलने गर्दछ । जसले गर्दा सफा र स्पष्ट तस्बिर लिन गाह्रो हुने गर्दछ ।
नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट सानो भन्दा सानो चीज जस्तो फोटोन कणलाई समेत पत्ता लगाउने गर्दछ । यो यति धेरै संवेदनशील रहेको छ कि कुनै पनि कोशिकाबाट निस्कने हल्का प्रकाशलाई पनि सहजै कब्जा गर्ने गर्दछ । यसले शरिरमा प्रकाश जानमा लाग्ने समयलाई पनि सहजै बताउने गर्दछ । जसले इन्डोस्कोपको ठाउँ पनि बताउने गर्दछ । यो क्यामेरा बिरामीहरुको बेडको नजिकै राखेर यसको प्रयोग गर्न सकियोस् भन्नका लागि तयार गरिएको बताइएको छ । ता कि बिरामीलाई धेरै पीडा नहोस् ।
सन् २०२० मा यूरो क्षेत्रको मुद्रास्फीति ०.३ प्रतिशत, सन् २०२२ सम्म १.३ प्रतिशत
एजेन्सी । यूरोपेली मुद्रास्फीति यस वर्ष केवल ०.३ प्रतिशतमा झर्ने यूरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले बिहीबार बताएका छन् ।
अमेरिकामा रहेको गान्धीको प्रतिमा तोडफोड
एजेन्सी । अमेरिकामा रहेको भारतीय दूतावास अगाडि अवस्थित महात्मा गान्धीको प्रतिमामा तोडफोड भएको छ । अश्वेत एक अमेरिकी नागरिकको प्रहरी हिरासतमै रहेको बेला मृत्यु भएपछि शुरु भएको आन्दोलनका क्रममा प्रतिमाम
अमेरिकालाई अर्को झट्का, आन्दोलनका कारण ५५ अरब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति
एजेन्सी । अमेरिकाको मिनियापोलिसमा एक जना अफ्रिकीमुलका अमेरिकी नागरिकको निधन भएपछि चर्केको आन्दोलनका क्रममा झण्डै ५५ अरब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको बेला ‘पोर्न साइट’हरुको यस्तो धन्दा
एजेन्सी । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस हाल विश्वव्यापी बनिरहेको छ । कोरोनाको कारण मानिसको दैनिकीसँगै विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको अवस्थामा ‘पोर्न साइट’हरुले भने अलग खालको धन्दा चलाउन थालेका छन् ।
आज घरघरमा तुलसीको दल राखेर निर्जला एकादशी पर्व मनाइँदै
महोत्तरी । हिन्दू मैथिल आज मङ्गलबार घरघरमा तुलसीको दल राखेर निर्जला एकादशी पर्व मनाउँदैछन् । जेठ शुक्ल एकादशीका दिन धार्मिक महत्वको वनस्पति तुलसीको दल राख्ने परम्परानुसार आज हिन्दू मैथिलका घरघरमा उत्सवकै रूपमा यो पर्व मनाइँदै गरिएको हो ।
बिहान चाँडै उठ्नुका फाइदा
यस्तो छ निमोनियाको घरेलु उपचार विधि
लकडाउनमा पनि आइतबार कैयौंको विवाह !
एजेन्सी । बेङ्लोरमा आइतबार एक जोडी बैबाहिक जीवनमा बाँधिदै थिए । जबकी त्यतिबेला बेङ्लोरमा कर्नाटक सरकारले लकडाउन लागु गरेको थियो ।
भारतमा जब नविवाहित दुलही कोरोना संक्रमित भएको रिपोर्ट आयो...
यो देशमा भइरहेको छ कोरोना पार्टी, जानी जानी फैलाउँदैछन् कोरोना भाइरस
पोखरामा रोचक विवाहः बेहुली पक्षले दिए मास्क र स्यानिटाइजर दाइजो
© Copyright 2020 NepaliPatro . All Rights Reserved.